UNGAYIFUMANA NJANI INTOMBAZANA UKUBA IKUTHANDE- IINDLELA EZINGAMA-29 WONKE UMNTU EKUFUNEKA AZI - INDLELA YOKUPHILA
Ungayifumana njani intombazana ukuba ikuthande- Iindlela ezingama-29 Wonke umntu ekufuneka azi
Kuya kufuneka uzithengise, olona hlobo luhle ngokwakho! Ayinamsebenzi nokuba ungumthengisi wemoto okanye unguJoe oqhelekileyo. Ubomi konke malunga nokuthengisa!
Nditsho nabona bathengisi babi, okokuqala ngqa kweli lizwe bafunda ngokwenza.
Ziqhelanise, ziqhelise, uziqhelanise. Uyivile isigidi samaxesha, kwaye ewe, ndiyazi ukuba iyaguga emva kwethutyana. Nangona kunjalo, abathengisi beenkwenkwezi bonke beli hlabathi bahlala bethatha umngcipheko omkhulu, bazinyathele eyabo i-dkk, kwaye bafunde kwiimpazamo zabo ukuze baqhubeke nokuqhubela phambili.
Ngexesha iakhawunti yabo yebhanki yeemvakalelo injengentaba, inkulu! Ekugqibeleni, bafunda ukuthemba amathumbu abo kwaye benze ngokungathi abanamida kumandla abo. Bangathengisa nantoni na kuye nawuphina umntu, kubandakanya nabo.
Ngalo lonke uloyiko, inye into ekufuneka beyenzile ngokuqhubekayo: Tsala i-d-mn trigger kwaye uthathe inyathelo.
Ngoku, esi sikhokelo sendlela yokufumana umfazi akuthande ayisiyiyo malunga nokuthatha inyathelo. Nangona kunjalo, ngokuyintloko yindlela owenza ngayo umsebenzi, ukuqala. Ndiqinisekile ukuba abanye benu bahlekazi balungele nawuphi na umngeni kwaye aboyiki ukusilela.
Apha ngezantsi uyakufumana iindlela ezingama-29 wonke umntu ekufuneka azi ngazo ebomini xa kufikwa ekufumaneni amantombazana ukuba akuthande. Ukusuka kwinto oyithethayo ukuya kwindlela onxiba ngayo nangaphaya. Oku ayisiyonto yakho yesiqhelo, ukubaleka kuluhlu lokusila onokuziva ulungile ngalo. Andinaxesha lokubhala ngoluhlobo lobubhanxa.
Esi sisikhokelo esichazayo, endithemba ukuba siyakwenza uqaphele indlela o-f-ck up up ngayo ekugqibeleni. Ukuba awukwazi ukuqonda ukuba ungayenza njani intombazana ukuba ikuthande emva kokufunda le nto, kuya kufuneka ubuye umva kwaye uqonde into ibenye: Ayinguye wonke umntu wasetyhini ngaphandle oya kukuthanda.
Ayingawo onke amantombazana afanayo! Ixesha. Musa ukulungiswa enye kuphela kwaye ufune ukuphelelwa lithemba njengamadoda amaninzi namhlanje.
Unokukhetha okuninzi; ezigidi kunye nezigidi ukuba unokuthi f-cking ukholelwe ukuba yinyani. Awudingi iFerrari okanye inqaba ukuze kwenzeke, nangona kunjalo, ziyanceda.
Uyifumana njani intombazana ukuba ikuthande
1. Thetha naye.
Abasetyhini abafundanga ngengqondo!
Yenza namhlanje. Hayi ngomso. Hayi xa engekho kude nabahlobo bakhe kwaye eyedwa. Hayi xa uziva umzuzu ulungile ngokungathi ukwenye intsomi yencwadi yamabali yeDisney. Hayi emva kokuba uhambile ukuba uthini entlokweni yakho okanye nokuba ubucebe ngobuchule kwindlela oza kuye.
Masijongane nayo; abafazi bafuna indoda eneebhola. Ukuba neebhola kuthetha ukuthatha inyathelo kunye nokutsala i-d-mn trigger. Phantse zonke izibini zeli hlabathi ziyathetha omnye komnye kubudlelwane. Ukuba awukwazi nokuyenza loo nto, ke andazi ukuba mandikuxelele ntoni. Nokuba uya kwamkela umngcipheko okanye uwuphephe! Ixesha.
Ndithe izihlandlo ezizigidi, kwaye ndiza kuphinda nditsho kwakhona: Uyazi kwangoko ukuba umntu obhinqileyo ushushu okanye ukuba akakho! Thatha inyathelo ngokukhawuleza, ungabi ngumlandeli olinda ejikeleze. Ungaze uphinde uqashele amathumbu akho!
Ukuba ukuqala incoko kubuhlungu kuwe, ke bona: Ungaqala njani incoko kunye nentombazana. Iya kuyilungisa yonke imicimbi yakho kwaye ikunike incoko yezihloko zokukunceda nawe.
2. Nxiba ukuChukumisa u-Slob!
Ukhetho lwempahla yakho lubalulekile .
Akumangalisi ukuba uninzi lwabasetyhini ebusweni beplanethi bakhetha umntu onemali: ayingabo bonke, kodwa uninzi. I tees zakho zemizobo kunye neejean ezimdaka kufuneka zigcinelwe xa usebenza njenge d-mn umlimi ekhaya.
Ukuba ufuna ukuphuma njengendoda engeyiyo i-bum, zihloniphe kancinci ngokuthatha ingqalelo kwinto oyinxibayo. Beka i-crisp Ihempe yokunxiba kwaye, ubuncinci, ijini ngaphandle kwamabala.
Kukho ezi zinto zibizwa ngokuba ziiwasher, dryer, kunye neentsimbi. Kuya kufuneka uzame. Nceda ungazifihli ngevumba eline-cologne okanye, okubi ngakumbi, ukutshiza komzimba. Yiba ngumntu omdala.
3. Umyeni njengoThixo.
Akukho mntu ufuna ukumanga umntu onomphunga.
Yikholwe okanye hayi, kodwa kukho amadoda nabafazi abaninzi phaya abalibaleyo ngezinto ezinjengokuxubha amazinyo. Gross, ndiyazi, kodwa akupheleli apho. Uninzi lwabafana luyalutyeshela uxanduva lokucheba iindevu zabo, ukuthatha ishawa, ukudibanisa iinwele zabo, ukunciphisa iinwele zabo, njalo njalo.
Ngapha koko, iya ngaphaya kweziseko. Ngaba uyasisebenzisa nesithambisi? Ngaba uzithembile ngokwaneleyo ukuba ungasebenzisa i-concealer phantsi kwe izangqa zamehlo amnyama okanye mhlawumbi ijeli yamashiya? Ukuba ibinzana lejusi likwenza ukuba uhambe, yintoni i-h-ll? ke kuya kufuneka ume kwaye ufunde ukuba ungazilungisa njani.
Akukho malunga nokuza njenge-metrosexual; imalunga nokujonga kunye nokuziva ungcono. Ngelixa iimpahla kunye ne-cologne isenza imimangaliso kwindoda, ayithethi nto ukuba umntu akazi ukuba angazilungisa kanjani. Nditsho neyona inde kakhulu, iindevu zobudoda zinokubonakala ngathi zizonke kwaye zigqibelele sh-t ukuba indoda iyala ukuyisika.
Iba yintsimbi eyoyikekayo. Ukuba oko kwakunganelanga, khawufane ucinge indlela abasetyhini abasabela ngayo xa bephuzana nendoda enebrillo pad ebusweni bayo. Yiloo nto eyenzekayo xa ungayigcini iindevu zakho; Ijika iye kwisandpaper kwaye ishiye irhashalala ebomvu ebusweni.
Khumbula, unyango lwamabala amaqhakuva, ishampu kwizinwele ezinamafutha, incakuba yeendevu, njl. Ekugqibeleni kuza kuxanduva. Nokuba uya kuwukhathalela umzimba wakho, okanye awunguye. Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayenza njani intombazana ukuba ikuthande, ilula: Mbonise eyona nguqulelo yakho.
4. Yiba noNene kwaye ube neNdlela.
Musa ukuba yihagu. I-Chivalry ayifanga.
Xa usiya emotweni, vula ucango kuqala. Xa ungena kwindawo yokutyela, mnike isityholo esinqeni ngasemva ngelixa umvumela ukuba angene kuqala. Xa uhlala etafileni, utsala utyhale esihlalweni sakhe kuqala. Xa esiya kwindlu yangasese kwaye abuye, uyaphakama ade ahlale phantsi. Awutyi de aphakwe iplate kuqala.
Abanye benu bantu mhlawumbi bafuna ukukhunjuzwa ukuba ukugqabhuka okunenjongo kunye nokuhamba kukrwada kwaye akuthandeki. Kufuneka umenze azive ekhethekileyo.
Ayinamsebenzi ukuba iindleko zokutya zibiza malini okanye u-odola malini, okanye u-odile. Wena, ndoda, ubhatalela isidlo sangokuhlwa se-f-cking. Andifuni kuva malunga nokulingana kwakho bullsh-t. Abantu bayenzile le nto kwizizukulwana, kwaye akukho mntu wakha wasweleka! Imali ifunyenwe kunye neziphumo zexesha lethu. Yimpawu encinci yentlonipho emfazini. Musa ukubawa okanye ululame c-nt ngayo.
5. Thatha kwaye uQalise.
I-pink floyd iitatoos zodonga
Musa ukoyika ukuchukumisa ukudlala; kubizwa ngokuba kukuncwasa.
Iba yingxaki xa unomsindo kakhulu kwaye uqala ukuthatha i-RSD ye-bullsh-t bayifundisa ngentliziyo. Xa usenza umntu wasetyhini azive engonwabanga ngoluhlobo, uyothuka kwaye uyacaphukisa.
Abanye benu bantu bayoyika ukunxibelelana. Kwinto enkulu, ndingacinga ukuba ucinga ukuba kuyingozi njengokuncamisa umfazi nokwenza laa nyathelo lokuqala. Nantsi inyani: Abantu ababini abathandanayo abathethi nje lonke ixesha. Ukuba bayenzile, ibiya kuba yindinisa emangalisayo.
Uya kubiza abo bantu babini: Abahlobo. Inyani yile, ukuchukumisa kuthatha izinto ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Kwigumbi lokulala, uninzi lwabasetyhini luyakuthanda ukubhengeza izinto ezinje: Andilali ndawo, andilali namadoda ngomhla wokuqala, andifani namanye amantombazana, njalo njalo, njengesizathu ndilale nawe.
Ngumdlalo, uvavanyo lweentlobo, kunye nendlela yokudlala ngothando uninzi lwamadoda olungayihoyi kwaphela.
Ngokwenyani, ujonga ukubona ukuba uyuthobela c-nt owonqena ukusebenza nantoni na. Nokuba uza kubetha xa ujongene nomceli mngeni okanye uyeke ukusilela. Sonke siyawazi umahluko phakathi kokulungileyo nokungalunganga, ngoko musa ukulilela le nto ingentla.
Ukuba nangaliphi na ixesha uziva ungonwabanga, uyahamba. Ixesha. Khumbula, kufuneka azive ekhululekile.
6. Musa ukuba nguGosa wasemnyango.
Yeyona ndlela ikhawulezayo yokufumana umhlobo ocandwe. Musa ukuwela kumgibe womntu olungileyo wesifo.
Abasetyhini abafuni ukunamathela, umntu osweleyo ongakwaziyo ukuzenzela izigqibo ebomini okanye azicingele. Inyani yile, kuya kufuneka ukwazi ukuzimela kwaye uzimele. Awuyi kuvumelana nayo yonke into ayithethayo okanye akholelwa kuyo.
Amadoda abuthathaka avumelana nje nayo yonke into kwaye enze njengomhlobo wakhe osenyongweni. Ewe, ngabona bahlobo bakhe basenyongweni kulungile… Lowo ongabekiyo!
Yiba nembeko ethile ngokwakho, kwaye ungavumi kangako. Akunyanzelekanga ukuba ube yindoda ewe. Kwimeko echaseneyo, musa ukuba neentloni kangangokuba awukwazi ukuthatha umngcipheko. Ukuba ufuna ukuhamba ngokudakumba ngentsimbi yesibini ekuseni kwindawo ekungafanelekanga ukuba uyile, musa ukulila ngayo. Yonwaba kwaye uyeke ukukhathazeka kakhulu.
Ukuba ufuna umse ezivenkileni umthengele izinto, ungabi yingxowa yemali angasenga nanini na xa ethanda. Abanye abantu basetyhini baya kuthatha ithuba kuwe xa kulula ukuba benze njalo.
7. Yiba Neenjongo Zakho.
Musa ukuba ngulo mfo ungenanto iqhubekayo ebomini buqu. Abasetyhini abafuni ukuthandana nabaphulukene ngaphandle kokuba, kunjalo, bakholelwa ukuba umntu unamandla kwaye banokumtshintsha abe ngcono.
Ukuba usebenza njenge-bagger kwivenkile yokutya, oko akuthethi ukuba wonke umntu obhinqileyo ebusweni bomhlaba uyakwala ukunika ixesha losuku. Oko akuthethi ukuba nawe kufuneka uzive woyike ngawe. Ukuba uphupha ukuba yi-CEO kwinkampani yeFortune 500 kwaye uyasebenza kuyo, ke unento oyifunayo.
Wonke umntu ngandlela thile okanye ngenye indlela uqala ebomini enze into abangafuni kuyenza ukuze bafike apho bafuna ukuba khona. Akufanele ube neentloni malunga nalapho usebenza khona. Into oceba ukuyifeza yiyo yonke into ebalulekileyo, okoko usebenza kuyo!
8. Yenza uBomi obunomdla.
Izinto endizithandayo zinceda kakhulu. Unokwenza kuphela iNetflix kwaye uphole kakhulu ngaphambi kokuba ikruqule. Amadoda angenazo izinto azithandayo azifumana engenanto yokwenza ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi kunye naye. Ekugqibeleni, uya kudikwa kukuhlala phantsi.
Ayinamsebenzi ukuba uya kudubula okanye upeyinte izinto kwimpelaveki. Zombini zenza umdla. Mmeme ukuba abe yinxalenye yezinto ozithandayo . Baza kongeza ulonwabo kunye nolonwabo kubomi obukruqulayo.
Khumbula, abantu basetyhini banomdla kumadoda aneendlela ezimangalisayo zokuphila. Awunakuba nayo enye yokuhlala kwi-bum yakho yonke imini!
9. Zijikeleze Nabanye Abasetyhini.
Wamkelekile kumandla okutsala.
Uninzi lwabafana namhlanje bacinga ukuba umona kuphela kwendlela esebenza ngayo. Ubonile ama-movie apho umfana unomfazi oshushu, obukeka bhetele ecaleni lakhe ukwenza enye intombazana ibe nomona ngaye. Nangona kunjalo, masibe yinyani apha.
Ukuba ujonga indlela yokwenza ukuba intombazana ikuthande, ayizukusebenzela yona leyo!
Umsebenzi osebenzayo kukuthetha nomntu obhinqileyo ubunokungahoyi kwaphela. Ndithetha ngexhegwazana okanye umfazi omncinci ongenamdla kwaphela kwezothando. Kwinyani, imalunga nokubonisa ukuba ubaphatha kakuhle njani abanye abantu basetyhini, aka yena.
Okwangoku xa ungena kwincoko nomfazi okanye iqela labafazi, abanye abantu basetyhini abakungqongileyo baya kuqaphela. Kufana nomlingo.
Yenza oku kukhanya kukujikelezile. Indikhumbuza ngendlela abantu abadumileyo ababa nayo ngayo imihlambi yabalandeli ebangqongileyo, nangona umculo wabo okanye italente yabo inokuba mbi. Inyaniso kukuba, konke malunga nokuqonda.
Ukuba ufuna ukubonakala uthandeka kuye, uze uthandwe ngabanye, ngaphandle konxibelelwano lwakho nabo.
Khawufane ucinge ngomfana kwivenkile yekofu oyalela isiselo, ahlale phantsi, asondele emfazini. Ngoku khawufane ucinge enye indoda ehamba kwivenkile yekofu, inencoko emnandi kunye ne-barista; uyahleka, uyancuma kwaye ubonakala onwabile macala onke. Indoda ihlala phantsi ize isondele emfazini.
Ngawaphi kula madoda mabini ocinga ukuba angalunge ngakumbi ekufumaneni intombazana ukuba ibathande? Inombolo yesibini wena, c-nt!
10. Khululeka kwaye wonwabe.
Ukuthandana akufuneki kube ngathi kukuthengiselana. Ayizizo zonke izivumelwano ezisebenzayo, zilungele ukuhambisa i-f-ck!
Uninzi lwenu bafo luxinekile zizinto ezingabalulekanga. Ke, kuthekani ukuba ekugqibeleni akapheli ekuthandeni okanye ayisebenzi? Ayinamsebenzi. Kukho izigidi nezigidi zabafazi phaya. Asinguye wonke umntu oza kuba ngulo. Sukuba noxinzelelo lokuba yintoni nokuba yintoni kunye nokuba yintoni.
Xa uphuma nomhla kunye nomntu obhinqileyo, sukujolisa ekutshintshiseni ii-resume zakho kwakhona. Kwenzeka lonke ixesha xa abantu bephuma besiya kwindawo yokutyela ukuhlafuna ukutya. Yenza imihla yakho ibe mnandi kuni nobabini. Yenza into enomdla okanye eyahlukileyo, kwaye ukhulule kancinci.
Ndiqinisekile ukuba abanye benu bazakuzama ukucwangcisa usuku lonke. Igama lengcebiso: Musa. Izinto azihlali zihamba njengoko bekucwangcisiwe, kwaye loo nto imnandi yokuthandana. Imalunga nokuvuleleka kumava amatsha kunye nezinto nomntu omtsha ngokupheleleyo ebomini bakho.
Phumla nje kwaye uthathe lula. Akukho sizathu konke konke sokuba nexhala okanye usebenze ngaphezulu kwezinto ezingabalulekanga. Ukuba ayizukukubulala, ke kuya kufuneka woyike ntoni? Akukho nto.
11. Nika ingqalelo kuLwimi loMzimba wakhe.
Abafazi balahla imikhondo emininzi; inkoliso yamadoda ayibahoyi.
Isalathiso semilenze yakhe, ukuhamba kwezandla, ukujonga amehlo, indlela ahamba ngayo, njl.njl. Inokukuxelela okuninzi malunga nendlela aziva ngayo. Sebenzisa olo lwazi ukukunceda, ungaluhoyi kuba uyonqena kwaye ungavumi ukuba kulo mzuzu wangoku.
Bona: Uxela njani ukuba intombazana iyakuthanda ngakumbi ngalo mbandela.
12. Yiya ngokulula kwizincomo.
Ewe, ukuncoma kuhle xa kuvela entliziyweni. Ukuba ubonakala emhle, kuya kufuneka ube neebhola zokuyithetha ngokunyanisekileyo. Nangona kunjalo, kukho umgca ococekileyo phakathi kwabambalwa kwaye baninzi kakhulu.
Ukuthanda uThixo, nceda ungamqinisekisi kwaye umnike ingqwalaselo enkulu kangangokuba urhaxwa kuyo.
Kukwanjalo ke nangezipho. Indoda ethumela iintyatyambo i rose ilungile kwaye imnandi. Indoda ethumela iintyatyambo, iitshokholethi, iiteddy bears, izacholo, ijezi eboshwe ngesandla, njalo-njalo emva komhla wokuqala kunokuba mhle kwaye kubonakalise ukuphelelwa lithemba. Khawufane ucinge ukuba umfazi wenze lonto kuwe. Uya kuba novalo olupheleleyo, mhlawumbi kufuneka ufumane imowudi yokuthintela.
13. Nika ingqalelo kwaye ube kwiXesha langoku.
Abanye benu bafana nokuba unayo i-ADHD xa uphuma kumhla okanye uzama ukuthetha nomfazi. Uyayihoya yonke into ayithethayo ngokungathi ayinamsebenzi.
Jonga, ndiyayifumana, incoko kunye namanenekazi inokuba yinto enesithukuthezi kwaye idimaze ingqondo amaxesha ngamaxesha. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba kufuneka uphume nje kwaye uphuphe ngaphaya kwabo.
Mamela into ayithethayo, kwaye uya kulanda izinto ezingabalulekanga. Andithethi nje ngezinto zokugcina incoko iqhubeka nayo emgcina exakekile. Ndithetha ngemibono yomhla olandelayo, izinto zokuthetha emva koko, nokuba kungumbhalo okanye umnxeba.
Uya kuqokelela idatha enceda ikhephu kunye neengxoxo ezizayo kunye nemisebenzi. Kancinci uyakha loo ncwadana yebali leDisney ebekulangazelela. Zonke iikhompawundi ekugqibeleni zinomdla.
14. Yiba Nguwe.
Ayinamsebenzi ukuba awungoyena mntu uzithembileyo emhlabeni okanye unomdla kakhulu. Wonke umntu phaya, ngenye indlela okanye enye, usebenza ukuphucula yena.
Asinguye wonke umntu ogqibeleleyo. Ixesha lincinci kweli hlabathi; uchitha ntoni ungumntu ongekho?
Awunakho ukubeka umboniso ngonaphakade. Ekugqibeleni, iya kuqhuba ikhosi yayo, kwaye uya kugqiba isidenge. Ngokuqinisekileyo, ubuxoki obuncinci obumhlophe obunjengomthengisi olungileyo owenzayo bulungile apha naphaya, kodwa sukulala indlela yakho ebhulukhweni yakhe. Akunjalo nokuba nokuziphatha. Endaweni yoko, konke kulungile malunga nokwamkela ukuba ungubani.
Mbonise oyinyani. Nyaniseka. Khumbula, ungasoloko ujonge ekubeni yindoda ebhetele okanye njengomntu omthandayo kwixesha elizayo.
Musa nje ukuzama ukudlala loo ndima xa ungakholelwa nakuwe. Awusoze uhambe gwenxa ngobunyani kwaye ube yindoda yokwenyani. Uninzi lwabasetyhini luya kuhlonipha kude lee kunenguqulo eyenziwe ngumntu ongekho.
15. Awudingi Iskripthi Somama F-cking.
Jonga, ndiyayifumana, ukuba ufuna ukufumana intombazana ukuba ikuthande, kuya kufuneka uthethe nayo. Kuninzi lwehlabathi elingenazintlalontle phaya ngaphandle, yingxaki yokwenyani. Ingxaki enkulu. Abazi nokuba baqale ngaphi.
Inyani yile, ukuqala incoko ngokuqinisekileyo akukho mbuzo, akukho nto inokukhathazeka ngayo. Abanye benu bantu niyenza le ngxaki inkulu; ayiyo!
Awudingi ukusebenzisa imigca yeepiki. Awudingi ngcebiso ze-RSD, amaxwebhu asemasimini, okanye izifundo zomama f-cking.
Ngaba ucinga ukuba utatomkhulu wakho wayisebenzisa loo sh-t xa wayethatha umakhulu wakho? Hayi! Wayeneebhola, into esilela kakhulu kula maxesha anamhlanje.
16. Qaphela ukuma komzimba nokuhamba.
Sukuzingela njenge-c-nt edandathekileyo elusizi kunye nokujikeleza.
Kufuneka uzive uphezulu ebomini xa uthetha nomntu wasetyhini okanye uphume nomhla omnye. Ayinamsebenzi indlela oziva uneentloni ngayo, ukuba novalo kangakanani, okanye ukuba yeyakho yokuqala okanye amawaka amahlanu!
Uthatha umngcipheko ngenye indlela, kwaye oko kuhlala kuyinto onokuzingca ngayo. Phumelela okanye ulahle; yidipozithi kwiakhawunti yakho yebhanki yeemvakalelo.
Ukuba awuqapheli, abafazi bathambekele ekuhambeni kancinci kunamadoda. Kuyabonakala ngakumbi xa bezama ukubaleka kwizithende eziphakamileyo. Nciphisa izinto phantsi kancinci kwaye uhambe ngesantya sakhe. Ukuba oko kuthetha ukuhambahamba ecaleni kwendlela njengofudo, uyakwenza oko!
Inyaniso, kuninzi kufana nesondo. Uninzi lwamadoda lufuna ukukhawulezisa ngokukhawuleza ukubhengeza uloyiso. Abasetyhini bafuna ukugezelwa kwaye ngokuthe ngcembe bayakhe ukusuka kancinci ukuya kwisantya esipheleleyo ngaphambili. Ukucothisa kunokudala ukuthandana okunzulu.
Qonda ukuba amadoda nabasetyhini basebenza ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Mqwalasele ngotshintsho kwaye uyeke ukugxila kakhulu kuwe. Iya kuvula amehlo akho kakhulu.
17. Qiniseka ngamagama akho kunye nezenzo zakho.
Themba ithumbu lakho.
Ungaze uthandabuze okanye ubhengeze! Qiniseka kwinto oyithethayo kwaye uyikholelwe. Abasetyhini bafuna indoda engagqithisi nje amazwi ayo ngamandla kodwa i-d-mn iqinisekile ngawo.
Musa ukuba ngu: Ewe, andazi… Okanye, andiqinisekanga… Okanye kuya kufuneka uthathe isigqibo ... Uhlobo lomfana. Kulungele ukumkhokela. Ukuba ucinga into ingumbono olungileyo, ungabinantloni kakhulu ukuyithetha, ukucebisa okanye ukuyenza.
Amathumbu akho aya kukuxelela ukuba wenzeni ngokulandelayo. Inye kanye ebomini bakho, nceda uzithembe kwaye uyeke uloyiko ukuba lubalasele kuwe.
Ungaze wabelane ngamathandabuzo akho kunye naye. Musa ukumxelela ukuba mhle kakhulu kuwe okanye ngaphandle kweligi yakho. Sukuba nexhala okanye uxinzelelo malunga nokuba uthanda kangakanani; ndiyeke ukumbuza ngokungapheliyo. Akadingi kuqinisekisa ukuba bonke ubuthathaka onabo bulungile kwaye awunamsebenzi.
18. Mhlekise Umqolo.
Musa ukoyika ukutyhala amaqhosha akhe ukuba uyatyhala awakho. Kumnandi, kudlala ngothando, kuyadlala, kwaye kudala uburharha obuhle. Maninzi kakhulu amadoda namhlanje asebenza ngokungathi ngokwenza njalo aya kuthi ekugqibeleni amcaphukise, kwaye amathuba abo kuye aya kudutyulwa ngokupheleleyo.
Khumbula, ukuthandana kunye nobudlelwane kufuneka kube mnandi. Kuya kufuneka uwazi umahluko phakathi kokufumana uburharha kunye nokuba yidick epheleleyo.
19. Ungaze unyuse i-Ex yakho ngokuKhanya okungalunganga.
Andikhathali nokuba ubudlelwane babebubi kangakanani okanye wenze ntoni kuwe okanye ngokungalunganga. Awungeni kwibali elinemizuzu engamashumi amathathu ukhalaza ngendlela awayebacaphukisa ngayo abaphilayo h-ll aphume kuwe. Awukhankanyi ukuba ungumsebenzi wamandongom uwonke owenzeka ukuba abeyintombazana ye-craziest emhlabeni. Akukho nanye.
Xa abantu basetyhini bebuza izinto ezilolo hlobo, bayayijonga impendulo yakho ngendlela elungileyo okanye engalunganga. Bajonga indlela oza kuthetha ngayo ngabo ukuba baya kuba yenye yeentombi zakho zangaphambili.
Khawufane ucinge ukuba umntu obhinqileyo angaziva njani ukuba angazi ukuba ubeke amagama amabi kwi-ex yakho yonke? Ufumana umbono wangaphakathi wendlela ophatha ngayo kwaye ujonge abantu basetyhini ngalo mzuzu uthetha ngobuhlobo bakho bangaphambili.
20. Musa ukuXolisa ngokugqithileyo.
Ngaphandle kokuba uhlala eCanada, apho kuqhelekile. Uxolo!
Ukuba uchitha isiselo kuye, uyaxolisa kwaye umphathele into aza kuma ngayo njengomnumzana. Ukuba ungqubana kancinci kuye okanye uthethe into esisiyatha, awuxolisi ngokungapheliyo. Ukuba uyithiyile inkanuko okanye umdlalo wakho, awuxolisi ngokuba wonwabele.
21. Myeke Athethe!
Sukuzonwabisa malunga nokuqhubeka kwakho ngelixa ubalisa ibali lakho lobomi yonke imihla. Akafuni kuyiva yonke loo sh-t. Mnike ixesha elininzi lokuba akuxelele ngaye, umhla wakhe, njalo njalo.
Musa ukuba ngumphulaphuli olungileyo; ube ngumphulaphuli obalaseleyo. Ngapha koko, ube ngoyena mphulaphuli ubalaseleyo emhlabeni. Bonisa umdla kwinto ayithethayo.
Masijongane nayo; Abafazi bathanda ukuthetha nge-f-cking. Mnike ixesha elaneleyo lokwenza oko. Akunjalo ngawe, wena, wena! Abanye abantu basetyhini phaya baya kuthetha ngokwenyani indlebe yakho. Ungaphendula imibuzo embalwa apha naphaya kwisithuba seyure, kwaye ngaphambi kokuba uyazi, utsala umdla kuyo. f-cking umlingo!
Yintoni uninzi lwabafana namhlanje abayiqondiyo kukuba uninzi lwabasetyhini ngaphandle apho luya kuyigcina incoko iqhubeka. Akukho sidingo soxinzelelo malunga nento oza kuyithetha. Uninzi lwabasetyhini luya kwenza uninzi lokuthetha kunye nemibuzo ukubuza ukuba ngaba uyabavumela kuphela!
22. Yazi indlela yokubhalela intombazana ngokufanelekileyo
Awudingi ukuva kuye rhoqo kusasa, emva kwemini, nasebusuku. Yiphe ukuphumla! Akanguye u-Facebook okanye u-Instagram; sukukhuphela ubomi bakho kuye! Cwangcisa ukumthumelela imiyalezo njengoko ekubhalela ukuze uphephe ukuhamba ngaphezulu.
Qaphela ubude bencoko. Musa ukumthumela iwaka lamagama okubhaliweyo malunga nendlela oziva ngayo ukuba ukukuthumelela kuphela isivakalisi okanye ezibini ngexesha. Inyani uninzi lwabafana namhlanje banomdla kakhulu kwisicatshulwa. Bakhawulezisa inkqubo bezama ukuphumelela.
Ngokuqinisekileyo abaqhelekanga malunga nayo kwaye bayithatha kakhulu. Uninzi luxhomekeke kwinto abayithethayo kwaye luzixhalabisa kaninzi ukuba bekufanele ukuba bathethile le endaweni yaleya. Kuyahlekisa ukukhathazeka ngezo zinto zezinto.
Njengomgaqo ngokubanzi ebomini, xa kufikwa kwizibhengezo ezinkulu, impumelelo, okanye izinto ezibalulekileyo, musa ukubhala umnxeba. Xa ubhala, kufana nokuthi, ayisiyiyo yonke into ebalulekileyo endikuxelela yona ngokungqalileyo; mhlawumbi awunguye owokuqala ukwazi. Nceda uthathe ifowuni ucofe.
23. Musa ukucela Guy yakho Abahlobo Ingcebiso
Ngaphandle kokuba bayityumze kunye nabasetyhini, uninzi lwabo alunokwazi ukuba bakuxelele ntoni. Okona kuninzi, baya kukunika intetho encinci ye-pep okanye ukuzithemba. Masijongane nayo; uninzi luphakathi ngokuphakathi xa kufikwa ekwazini ukuba ungayenza njani intombazana ukuba ikuthande.
Ngokuqinisekileyo, awuyi kuthatha ingcebiso ngendlela yobunjineli bebhulorho eyakhiweyo yokuhamba kweemoto kumqhubi wenqwelomoya, akunjalo? Iya kusilela ngaphakathi kosuku, ucinga ukuba ungakha into, ukuqala ngayo!
Eyona nto ndiyithethayo ngaphandle kokuba uyinkampani yomntu ophetheyo ophetheyo ekuthandaneni nabasetyhini, kungcono kakhulu ukuthembela emathunjini akho. Sukuthatha iingcebiso ze-sh-t kubantu be-sh-t, ngakumbi xa bengavumi ukuthatha umngcipheko ngokwabo.
Ngoku, uninzi lwamadoda namhlanje luhlala ebharini kunye neqela labo labahlobo kwaye ulinde umzuzu umfazi oshushu abambe iliso labo. Baza kudibana nabahlobo bebuza zonke iintlobo zobubhanxa: Ngaba ujonge kum? Ngaba ucinga ukuba akatshatanga? Uthini amathuba am? Ngaba ndifanele ndiphakame ndibuhlungu, ndonqena ukuthetha naye? Kuqhubeka kuqhubeka…
Inyaniso ngabahlobo bakho abafana mhlawumbi abamazi. Ayingabo. AbangoThixo. Abazazi iimpendulo ze-d-mn. Olona hlobo kuphela lokufumanisa ukuba intombazana iyakuthanda na kukuthatha umngcipheko kwaye uzibonele ngokwakho. Ixesha!
Emva komhla okanye ukwahlukana, uninzi lwabafana lufikelela kwiingcebiso. Baza kuphinda baphindaphinde umhla okanye ubudlelwane kunye nenye indoda okanye iqela labahlobo kwaye bazame ukufumanisa ukuba zihambe njani izinto okanye zonakaliswe yintoni.
Inyaniso, akukho mntu unokuqikelela ngokuchanekileyo kuyo. Akukho mntu wahamba nomhla naye ngaphandle kwakho! Kuyafana nakubudlelwane obungaphumeleli. Akukho mntu unebali elipheleleyo, ngaphandle kwakho.
Ngale nto ithethwayo, sukuphinda uhlaziye izinto kwaye mazikuhluphe. Let the what if’s kwaye kufanele ukuba ndihambile. Ukuba umfazi uyakuthanda, uya kuyazi ngaphakathi kwexesha. Ukuba akwenzi njalo, impendulo iya kuthi ekugqibeleni iziveze.
24. Ukunyanzeliswa nguMlingo onetyhefu.
Ngokwam, andikukhuthazi ukuba usebenzise ubuqhetseba kwinzuzo yakho. Ayilunganga xa kuthethwa ngokuthandana; ayisiyoshishini apha.
Nangona kunjalo, oku akuyi kuba sisikhokelo esipheleleyo nesizeleyo ukuba andiyibandakanyi. Isebenza ngokumangalisayo, imimangaliso enetyhefu… Ingxaki kukuba, ifuna ukuziqhelanisa, kwaye ubuchule bungaphezulu kokwakha ngaphezulu kwexesha elide. Ubuninzi bokuzalwa ebomini apho ukuphathwa gwenxa sisihlandlo semihla ngemihla sokuphila.
Uyabona ngokusebenza xa umfazi ehlala nendoda emphatha njengodoti. Uyamthanda, kwaye uyazibuza ukuba kutheni emhlabeni? Kumntu wangaphandle, ayinangqondo kwaphela. Kumlawuli weqonga, ngumdlalo wechess kuphela apho umntu angoyiswayo, nokuba udlale imidlalo emingaphi.
Abanye benu banokubona oku njengenkwenkwe embi yakudala. Kodwa oko ikakhulu yinkanuko nomona kwizenzo. Ngokuqinisekileyo, ukukhohlisa kudlala kwezo mvakalelo, kodwa kwahluke kakhulu kwaye kunzima. Iyafana nomthengisi onokufumana nabani na kunye nomntu wonke ukuba athenge imoto kwiqashiso lakhe. Ukuba uhamba emnyango, uyahamba ngemoto, ixesha.
Nangona kunjalo, luthando olunetyhefu. Uninzi, ukuba ayingabo bonke, nina manenekazi afunda oku, anifuni ukuba kolo hlobo lobudlelwane. Inyaniso kukuba, ayifanelekanga.
Ngoku, ndiyazi ukuba abanye benu baya kuba nomdla ngalo mbandela, kwaye andinaxesha lokuzibhala zonke ngokwam. Ukuba ungathanda, kukho incwadi ebizwa ngokuba buGcisa bokuSebenzisa. Kuyo, uya kufumana izinto ezininzi ezinomdla zokwetyisa. Nangona kunjalo, ngokunyanisekileyo ngekhe ukwazi ukufumana ikopi.
Ngelishwa, ndiyazi… andithethi ngohlobo lwanamhlanje. Le yabhalwa kwiminyaka engamashumi amahlanu okanye amashumi asixhenxe aneminyaka edlulileyo kwaye kwavakala ukuba iyincwadi ekufuneka bayivimbile ngokwasemzimbeni. Emva kokuyifunda, ndinokuhlela ukuba kutheni. Kungakhathaliseki, awuyidingi; Apha ngezantsi, uya kufumanisa ukuba kutheni:
25. Yiba sempilweni.
Uyade uphakamise bhuti?
Akunjalo nje ngezihlunu. Imalunga nokuba sempilweni. Xa usempilweni, uziva ulunge njengoko ujongeka!
Uhamba ngokungathi uphakamileyo ebomini. Ukuba ulibhityile kwaye unciphile, zuza ubunzima kwaye upakishe izihlunu. Ukuba une-metabolism ekhawulezayo, musa ukubila; Andikucebisi ukuba kufuneka ube ngumakhi womzimba osisigxina apha. Ukuba utyebe kakhulu kwaye utyebe kakhulu, sika ukutya okukhawulezayo ebomini bakho ukuze utshintshe ixesha lokuzilolonga.
Khumbula, ukuba ufuna ukuba intombazana ikuthande, imalunga nokuvela nje. Ukuzilolonga kunye nokumila kuhamba ixesha elide xa kuziwa ekwakheni ukuzithemba nako.
Isitshixo kukuba ube yeyona nguqulelo ilungileyo ngokwakho. Ayisiyonto ye-c-nt eyonqenayo engafuni ukufaka nawuphi na umzamo, okanye ubuncinci obungenanto, yenza i-ounce enye yokuzihlonipha.
26. Qhagamshelana naye kuqala.
Xa usenza oku, kuyambonisa ukuba unganobuhlobo kunye nomdla. Endaweni yokuba uthathe isitokhwe esininzi ekuziqhelaniseni nendlela oza kuya nayo kwintombazana oyithandayo okanye ukuziqhelanisa nolwimi lomzimba, ukujonga iliso ngokulula yeyona ndawo onokuqala kuyo.
Beka indawo kufutshane naye ngaphambi kokuba uthethe naye. Ukuba usebar, yiya ngokungathi uza kubeka iodolo, emva koko xa ekubamba, ncuma. Emva koko wavula ukuze ubulise. Ke, kulula.
27. Yithi Molo.
ii-tatoo zesiqingatha semikhono yamadoda amnyama nezimpunga
Kubonakala kucacile, kodwa indlela yamadoda amaninzi echitha ixesha elininzi efunda ii-hellos zabo ezilula ngaphambi kwexesha. Endaweni yokuthatha imikhwa kwabanye kunye nokuhlaziya ngaphezulu, yiba nguwe, yigcine iyintsusa, kwaye uthi hey.
Unokukhetha ubuqili ukuba oko kuyahambelana nobuntu bakho. Ukuba umgca owunikayo ubonakala uqheliselwa kakhulu kwaye uziqhelanise nawo, ngokuqinisekileyo uza kuphakamisa iiflegi ezibomvu zentombazana, kwaye uya kuyibhukisha.
28. Unjani ukuma kwakho komzimba?
Ngaba ufuna ukufumana indlela yokubonisa ukuzithemba ngakumbi? Kulungile, unjani ukuma kwakho? Ukuma kakuhle kunokwenyusa ukuzithemba komntu kunye nomtsalane.
Ke, iyayichaphazela indlela intombazana entle ekubonayo okwesihlandlo sokuqala kwaye iyenza ukuba i-subconsciously ifane nawe- ubuncinci.
29. Ukuqalisa Incoko.
Ke, ubukwazile ukudibana namehlo kwaye ubulise. Zeziphi ezinye iziqalo zencoko osebenza nazo ukufumana ingqalelo yakhe kwaye umgcine enomdla? Fumana izinto onomdla wokuthetha ngazo.
Ukuba uhlala kwivenkile yokutyela, umzekelo, qalisa incoko ngokuthetha ngesiselo okanye into oyithandayo. Yigcine ilula kwaye ilula. Kuya kukhokelela ekubeni ufumane umdla oqhelekileyo phakathi kwenu nobabini kwaye kuya kumnika ixesha lokuba afudumale. Jonga uluhlu lwethu lwemibuzo oza kuyibuza intombazana.
Ukuhlala ngaphandle kwendawo yoMhlobo
Kwaye ngoku indawo eyoyikekayo yomhlobo. Uzama ukwenza ukuba le ntombazana ikuthande kwaye ingagcini nje ngokuma ngakwindawo yomhlobo, akunjalo? Ukuba ufumanisa ukuba uzika inzipho kwindlela yakho yokuphuma kwindawo yomhlobo, kuyacaca ukuba wenze into engalunganga. Ukuba awuyazi indlela yokutsala abantu basetyhini kwaye awulandeli iingcebiso zethu ezilula nezilula kunye neengcebiso, kuya kufuneka wenze umsebenzi obalulekileyo ukuze uzikhuphe.
Khumbula ilizwi elidala, musa ukusebenza nzima - sebenza ngobukrelekrele. Kuya kufuneka uqale wamkele isikhundla sakho kwaye uqonde ukuba isenzo sakho kude kube kweli nqanaba sikubeka apho. Kuya kufuneka utshintshe indlela ocinga ngayo, nezenzo zakho, kunye nemikhwa yakho ukuze ube yindoda eya kutsala umdla kuyo.
Yeka ukuzisizela, uzikhethele, kwaye ubeke lo msebenzi ukuba ucinga ukuba iziphumo ezinqwenelekayo ziya kulunga.
Ayisiyo yokuba ungumfana nje olungileyo, kwaye uninzi lwabasetyhini lukhangela ngokuchaseneyo. Abasetyhini batyumza, bathandane, kwaye bathande ingqalelo. Ukuba yindoda ye-alpha kunye ne-ego yokunyusa ayizukunceda ukuzinzisa indlela yakho yokuphuma nayo. Nangona kunjalo, ukuba yindoda yokwenyani kwaye uneziphene zakho yeyona ndlela ingcono yokuqala.
Sukuba nexhala. Sinazo zonke iindlela onokuzinceda ngazo uphume kummandla womhlobo ukuba ufumanisa ukuba akanamdla kuwe kwezothando. Awodwa, sihlobo sam. Sonke siye sabakhona ngexesha elithile.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ungayenza njani intombazana ukuba ikuthande:
Ekugqibeleni, ndinamagama amathathu alula kuwe: f-cking yenze.
Abafazi bafuna indoda engoyikiyo ukutsala umdla. Lowo uqinisekile ngamazwi akhe nezenzo zakhe. Lowo ukulungele ukulawula kwaye enze njengenkokeli. Ngamanye amagama, eyona nguqu yakho ilungileyo kwaye uyikholelwe. Yonke into iyabila ekuthatheni umngcipheko kunye nokoyisa uloyiko.
Umfazi onomdla kuye unempendulo. Ngokwenene kukuhamba kwakho. Qonda ukuba yintoni, ngokwenza, hayi ngokuphupha nokwenza izigqibo. Ayizizo zonke iintombazana ezokuthanda ubuye, yinyani leyo yobomi. Musa ukuchitha ixesha uzikhathaza ngezinto ongenakukwazi ukuzitshintsha!
yintoni enganyatheliyo kum
Izimvo zesipili segumbi lokuhlambela kwigumbi lokuhlambela elincinci
indlela yokwenza iblukhwe yekhakhi
mama ibhere kunye neebhabhu ezi-3 kumvambo
imibono yokuhlamba i-master bath
I tattoo ebhabhathane eluhlaza okwesibhakabhaka nemfusa